Tiorka kintan’ny gadona pop, nahatezitra vahoaka ny fanehoankeviny tsy miraharaha ny olana ara-toekarena misy ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Fironana ao amin'ny Twitter Tiorka ny "Avelao zareo hihinana simit"
Voadika ny 21 Desambra 2021 13:06 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Ελληνικά, Español, English
Hulya Avsar miresaka amin'ireo mpanangom-baovao. Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanadihadian'ny TV100..
“Raha izay no tsy maintsy ataon-dry zareo, avelao izy hihinana simit,” hoy ilay Tiorka kintan'ny gadona pop, Hülya Avşar, tao anaty antsafa iray niarahany tamin'ny media tao an-toerana momba ny olana ara-toekarena misy ankehitriny ao Tiorkia. Ny hoe “Simit” dia mofo boribory tiorka, sakafo mahazatra eny an-dalambe manerana ny firenena. Fa na ny vidin'ny simit aza dia niakatra avo dia avo tamin'ny Desambra, taorian'ny niakaran'ny vidin'ny kilaon'ny sésame, 13 TRY lasa 35 TRY. Avy hatrany ilay mpihira dia niatrika kiana nivaivay, ary ireo fanehoankeviny dia nampahatsiahy betsaka ireo fomba fiteny mampalahelo nalaza be, “Avelao ry zareo hihinana mofomamy.” Fironana be nandritra ny fotoana fohy tao amin'ny Twitter tiorka i Marie Antoinette.
Nihazakazaka be ny fitontongan'ny sandan'ny vola tiorka satria nahatratra 20% ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ity volana ity, ireo mpandalina naminavina fisondrotana iray hafa 10% ho an'ny taona ho avy.
Azo sary i Avşar teo am-pamaliana ireo fanontanian'ny mpanangom-baovao momba ny fitontongan'ny lire sy ny fitomboan'ny fahantràna, raha izy nanambara iny hoe, “Azo antoka fa hisy fiantraikany amin'ny olona rehetra sy ny ankolafy tsirairay ny olana ara-toekarena. [Ankehitriny ny olona miteny], ‘Dia hihinana simit ve izany isika izao?’ Raha ilaina, dia hohanina io, saingy ho mora kokoa ho antsika ny handia ireny andro ireny. Tokony handray an-tànana an'io ny isam-batan'olona amin'izao fotoana izao.”
Marobe ireo Tiorka no tsy mahavidy intsony ireo vokatra fototra toy ny mofo, voalaza fa lasa misy filaharana lavabe miforona eny ivelan'ireo kiôska fivarotana mofo mahazo fanohanana ara-bola. Tao anaty antsafa iray ho an'ny The New York Times, mponina iray tao Istanbul, Sengul Essen, 57 taona, nilaza hoe, “Tsy vitan'ny olona intsony. Niasa nandritra ny 21 taona aho nanadio ny oniversite, dia ankehitriny aho miandry mofo iray anaty filaharana.” Mponina iray hafa, mpikirakira herinaratra, nilaza fa zara raha mahavita ny ankohonany ny karama 2.900 lire raisiny isambolana, izay raha ny takalo amin'izao fotoana dia misanda 207 Dolara Amerikàna.
Raha miverina ao amin'ny Twitter, ny sasany miantso an'i Avşar ho tsy maharaka ny zavamisy ka nanakiana ny fomba fiainany feno rendrarendra.
Raha misy filàna, tsy hanao botox mihitsy izahay fa hotafitanay ity vanimpotoana ity.
Ny sasany amin'ireo mpampiasa kosa manao resaka tsy loa-body momba ilay nosy mitentina 55 tapitrisa TRY novidian’ilay mpihira tamin'ny taona lasa ho an-janany vavy.
Hülya Avşar miteny fa raha ilaina, dia hohanina ny simit. Raha lany henatra ianao, farafaharatsny akombona ny vava! Ity vehivavy ity, izay nividy nosy mitentina 55 tapitrisa tamin'ny taona lasa, sy fiara misanda 5 tapitrisa, andro telo talohan'izao, dia tsy tonga saina hoe mbola lafo lavitra noho ny mofo dipaina ny bagels ary voky mofo nialin'andro natsoboka tanaty ranon-tsiramamy anie ny zazakely.
Rehefa tafaverina eny an-dalambe, mahalaza ny zavatra rehetra ny fahatsapan'ireo Tiorka. Raha niresaka tamin'ny The New York Times, mpivarotra iray an-dalambe izay mivarotra simits no nivanàka tamin'ny fisondrotry ny vidiny, ka niteny hoe, “Mihevitra aho fa tonga ny andro farany.”